FASAL CANAB "KODRYANKA" - VITICULTURE
Dhammaan noocyada canabka ah waxay leeyihiin sifooyin u gaar ah, kuwaas oo bannaanka u jecel yihiin.
Tani waxay ka hadlaysaa maaha oo kaliya sifooyinka dhadhanka iyo xajmiga rucubyada, laakiin sidoo kale qulqulista, korniinka, wakhtiyada dhirta iyo ka saarista, iyo xeerarka beeritaanka iyo daryeelka.
Waxay ku saabsan tahay sifooyinka noocan ah ee kala duwan ee canab "Codreanca", taas oo loo tixgeliyo noocyo kala duwan, waxayna kuu sheegi doonaan hoos.
Waxaanu diirada saarnaa dhammaan qodobbada ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad ogaato markaad bilaabayso inaad canabka ku dhasho, iyo sidoo kale kuu sheegto sifooyinka wanaagsan ee noocyada kala duwan.
Canab "Kodryanka" - heysta rikoodhka ripening
Kala duwan tani waxay ka heshay tayada wanaagsan ee waalidiinta, kuwaas oo ah noocyada kala duwan ee canabkale ee Moldova, waxay soo dhaafeen kala duwanaanta Marshall. Waxaa loo caleemo saaray dalka Moldova, taas oo qarniyaal badani caan ku tahay caanaha quruxda badan, waana muhiim in la ogaado in kala duwanaanta noocaan ah ay aad ugu qiimeeyso guriga.
Kooxaha canabka ah "Kodryanki" - waa maxay caanka ah iyo waxa ka duwan?
Beerta cayayaanka iyo beerta feejignaanta leh ee baadiyaha Krygia waxay ku farxi doonaan rucubyo aad u ballaadhan oo canab ah. Sidaa darteed, miisaanka hal farabadan celcelis ahaan waa qiyaastii 500-600 garaam, laakiin kooxo shakhsi ayaa 1500 garaam.
Isla mar ahaantaana, inkasta oo ay tiro badan tahay, waxay si aad ah ugu xiran yihiin baadiyaha, si ay u deldelaan on muddo dheer horay u jirtay gobolka ay ku qaan gaar ah. Waxaa haboon in la ogaado in berry lagu meeleeyo xerada si dhexdhexaad ah, iyaga oo ka soo jeeda garoonku waa mid ku habboon, iyada oo aan waxyeello u geysan kuwa deriska la ah. Miro dabiici ah ayaa sidoo kale uqalmaa dareen gaar ah.
Cabbirrada miraha canabka ah Noocyada Codreanka waa mid aad u ballaaran, miisaankoodu waa 6-8 garaam. Celceliska dhererka miisaanka waa 3.1 sentimitir, iyo width - 1.9. Qaabka qaabka berriga ayaa inta badan laga helaa midabtako ama firiirid. Maqaarka canabkuna wuxuu leeyahay midab madow, oo u dhow madow.
Lakabka rasuulka (xayawaanka wax lagu daboolo dusha sare ee berry canabka ah) waa mid aad u ballaaran, laakiin looma dhaqmin maqaarka, laakiin waxay u adeegtaa sidii badbaado. Peel runtii ma dareemeynin marka cunista berry ee cuntada.
Laalaabka Berry Cows Codeyanka waxay leedahay dhadhan aad u fiican oo hodan ah. In qaabkeeda, saxarka ah waa mid aad u fiicani iyo casiir leh. Miraha waxaa sidoo kale lagu gartaa joogitaanka tiro yar oo ah abuurka, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, waa ay awoodaan iyagoo aan lahayn tuubo si ay uga soocaan saxarka. Waxyaabaha ku jira saxarka ee sonkorta ayaa aad uga sarreeya qadarka acid. Sidaas darteed, xaddiga sonkorta sonkorta Codreanka celcelis ahaan waa 18-19%, halka acids - 6-8g / l.
Miro yar ayaa leh ujeedo miisaan, inta badan koray iibka, sababtoo ah kooxaha kala duwan ee noocaan ah waxaa lagu kaydin karaa muddo dheer.
Isticmaalka canab iyo winemaking, sababtoo ah waxaa ku jira xaddi weyn oo casiir iyo sonkor. Miraha la qalajiyey laguma sameyn, sababtoo ah waxay leedahay miraha beeraha.
On dhalidda ee canab "Kodryanka"
Kala duwanaantani waxay ku dhacdey jacayl siiyay beeralayda iyo kuwa jecel canab, maaha wax badan oo dhadhan ah sida hadhuudh badan oo dalagyo ah. Iyo waxa laga filayay beeraha noocan oo kale ah iyo kooxo kale. Waxaa sidoo kale mudan in la xuso in baadiyaha ee kala duwan ee canbaar Codryanka sida caadiga ah waxay leeyihiin koboc aad u xoogan oo waxaa lagu kala soocay ay size weyn. Marka sannadka labaad ka dib marka la beero ama tallaalka, waxay mar hore awood u leedahay in ay koraan qiyaasta cajiibka ah waxayna bixiyaan wax-soosaarka ugu horreeya.
Shuruudaha Bisaylkiisa "Kodryanki" ayaa yimid waqti hore. Sida horay loo xusay, berry ah ee kala duwan ee this bislaadaan ka mid ah ugu horeysay. Wakhtigooda dhirta ayaa soconaya 110-118 maalmood. Isla mar ahaantaana, waxaa haboon in la ogaado in xitaa ka hor bilawga ah ee bislaalka buuxa ee berry, waxay horey u noqdaan taam u ah isticmaalka aadanaha. Gaar ahaan, horeyba leh tilmaamaha sonkorta canab ah ee 12-14%, waxay keenaysaa dhadhan fiican.
Acidity "Kodryanki" ayaa hoos u dhacaya. Ka dib markii ay fulinayaan, canab iyo beeraha waxay ku hareyn karaan duurka muddo dheer, iyagoo aan lumin labadoodaba sifooyinka dibadda iyo dhadhanka.
Faa'iidooyinka ugu weyn ee kala duwan ee Codrean Codrean kaas oo uu jecel yahay
- Kala duwan waxaa lagu tilmaamaa heer aad u sareeya oo iska caabin ah oo ku yimaada cudurada sifaha beeraha. Heerka dhaawaca ee kalluunka casaankiisa iyo jeexjeexyada ayaa kaliya 3 dhibcood.
- "Codreanka" canabkeen duurka waa kuwo aan ka cabsaneynin heerkulka hooseeya. Xitaa marka la barbar dhigo barafka -23ºS, gabi ahaanba wax dhaawac ah lama soo sheegin duurka.
- Kooxaha iyo canabku waxay leeyihiin bandhig aad u sareeya, taas oo ay aad u qadarinayaan. Sidoo kale, waxaa si fiican loogu darayaa dabeecadahan in kooxahaasi ay si fiican u qaadi karaan, maxaa yeelay maqaarka berry waa mid aad u qallafsan, waana wax aan la jajabin marka la ruxayo. Nolosha khudradda canabkiisa "Coderyanka" muddo dheer.
- Dareemisku aad ayay u sarreeyaan, waxay si joogto ah u dhacaan sanad walba. Isla mar ahaantaana, wax-soosaarku ma aha kuwo u nugul xaaladaha cimilada xun, ma yareeyaan tiradooda guud.
- Caleenta "Codreanca" waa mid aad ugu habboon beerashada meelaha gaarka loo leeyahay.
Dhibaatooyinka kala duwan ee kala duwan iyo sida loola macaamilo
In kasta oo ay jirto xaqiiqda ah in muujinada guud ee caleenta Coderianka ee si siman aan hoos u dhicin xaalad kasta, haddana mararka qaar ayaa leh beeraha pea laga yaabo inay dhacaan. Xaqiiqada waa in la tixgeliyaa oo la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago tan. Si looga fogaado canabka sonkorta, beeralayda khibrad leh waxay u isticmaalaan daroogada sida gibberelin. Iyada oo, waxaad si fudud u hortagi kartaa ma aha oo keliya digir, laakiin sidoo kale ku guuldareysi ah canab waaweyn oo aan lahayn godad.
Waa muhiim in la ogaado:
Berry walwalka ayaa loo tixgeliyaa cilladaha waaweyn ee kaliya haddii canabku loogu talagalay iibka. Sababta oo ah digirta, waxay lumisaa bandhigeeda soo jiidasho leh mana aha mid aad u qiime badan. Si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale, thanks to beerta pea, waxay awoodaan in ay gaaraan muddo ah ee badeecada macaamiisha si aad u dhakhso badan.
Waxaa la ogaaday in berry yar yar ay ku badan yihiin diirada sonkorta ee ka kooban. Sidaa darteed, canab yar ee caleenta Kodryga ayaa leh calaamado dhadhan badan. Intaa waxaa dheer, ma ahan kuwo dillaacsan marka roobabku badan yihiin oo kallana way yar yihiin.
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato faa'iidada iyo bogsashada guryaha ee canab "Codreanka"?
Waxyaabaha kiimikada ee canab Noocyada Kodryanka ayaa si fudud u buuxsamey fitamiino kala duwan oo waxtar u leh saameynta xaaladda jidhka bini'aadamka.
- Casiirka Macdanta "Kodryanki" waxaa ku jira fitamiinada C, B iyo P, iyo sidoo kale fitamiinada ku jira kooxdooda. Maqaarka iyo saxarka ee noocyada kala duwan waa mid aad u hodan ah pectin. Waxay hodan ku yihiin carotenes. Waxaa haboon in la ogaado in la kordhiyo heerka difaaca jirka, maadooyinkan ayaa awood u leh inay wax ka qabtaan oo ay wax ka geystaan ​​geedi-socodka nadiifinta jidhka radionuclides iyo walxaha kale ee culus.
Sidaa darteed, canabkani waa mid aad u faa'iido leh dadka ku nool magaalooyinka agagaarka kiimikada waaweyn. Sidoo kale, canabkiisa kala duwan ee noocaani waa antioxidant aad u fiican.
- Waxyaabaha kiimikada ah ee canabku "Kodryanka" ayaa sidoo kale hodan ku ah walxaha saameynaya antiseptic jirka, waxay yihiin difaacayaasha bini'aadamka ee caabuqyada infekshannada kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah enzym, lipase, walxaha nitrogenous iyo phytoncides.
- "Codrean" waxaa lagula talinayaa isticmaalka cusub ee kuwa qaba xanuunka bronchitis, dhibaatooyinka beerka iyo wadnaha wadnaha, isku dayaya in lagu daaweeyo dhiig-yarida iyo gout.
Waxaan bilawaynaa inaan ku beeri canab "Coderyanka". Tilmaamaha guud
Waxaa haboon in la xuso in faa'iidada weyn ee kala duwan ee Codrean Codrean marka la beeray waa in aysan aheyn mid aad u xajin ciidda. Waxaa lagu abuuri karaa gebi ahaanba aan ku haboonayn carrada beeraha, halka dhalidda miraha wali ay sii ahaan doonto mid aad u sareysa, waana mid si adag u qaadan doona xidid kasta.
Intaa waxaa dheer, sumcaddiisa oo dhan adduunka oo dhan ayaa u qalantay awoodiisii ​​uu ku heli lahaa xidid iyo midho dhasho xaaladaha cimilada kala duwan. Dabcan, kama hadleyno kulaylaha iyo waqooyiga, laakiin canabku si wanaagsan buu u kora koonfurta Koonfurta Ukraine iyo Ruushka, iyo gobolladooda Bartamaha iyo Waqooyiga. Laakiin weli, oo bilaabaan inay beeraan kala duwan ee canab ah waa in ay tixgeliyaan muuqaalada badan.
Sidee iyo sida loo faafiyo canabka "Coderyanka"?
Kala duwanaantan sababa badanaa waxay soo saari doontaa sababtoo ah sapling sanadlaha ah. Nidaamkan dhalmada waxaa loo tixgeliyaa sida ugu waxtarka badan iyo fudud, sababtoo ah uma baahna waqti iyo shaqaale badan. Laakiin, haddii aad horey u leedahay canab si aad u bedesho "Codrean", waxaad isticmaali kartaa habka loo yaqaan "gruning". Tani, kaliya goynta "Codreanka" oo sannadle ah ayaa la isticmaali doonaa, taas oo u baahan doonta in lagu tallaalay qafis gaar ah oo ah baadiyaha sabiib ah.
Waa maxay waqtiga loo beerto canab?
Haddii aan ka hadlayno beeritaanka canjida canab, markaa waqtiga ugu wanaagsan ee tani waxay noqon doontaa dayrta goor dambe, kahor bilawga xilliga miraha joogtada ah, ama horraanta gu'ga, marka barafku uu dhalaalay, iyo burooyinkuna weli ma bilaabin buro.
Waxaa suurtogal ah in la gooyo gooyn canab ah ku dhowaad dhammaan wareegga sanadka, labada guga, iyo xagaaga iyo dayrta. Iyada oo ku xiran nooca tallaalka aad doorato, wakhtiga habka loo marayo nidaamkan ayaa sidoo kale ku xirnaan doona. Haddii aad rabto inaad ku beerato "madow" (oo ah, aan weli la iloobin) jarida saamiga "madow", tani waxay noqon doontaa guga hore.
Haddii "madow" goynta saamiga "cagaaran", markaas waqtiga ugu wanaagsan wuxuu noqonayaa dhammaadka guga iyo maalmaha koowaad ee xagaaga. "Green to Green" canab ayaa lagu beeray dayrta, qiyaastii qeybtii hore ee bisha Oktoobar.
Xeerarka iyo sifooyinka beeritaanka geedo canab
- Dhirta dhirta Greenwich sapling waa in la fuliyaa oo keliya horey loo diyaariyey god. Its depth waa in aanay noqon weyn, laakiin hooseysa waa in lagu shubo dhulka ku qasan bacriminta si ay ugu dhaartaan iyada nafaqooyin.
- Ku rid seedling ee ceelka waa in si taxaddar leh oo si tartiib ah u buuxsamaan ciidda bacrin ah ee habka sida in kiiska jirin dhaawici doonaa xididdada baadiyaha.
- Ciidda, oo loo isticmaalo buuxinta godadka, ayaa waxoogaa yar la dari karaa walxaha macdanta.
- Waxaa muhiim ah in aad si xoog leh u xoojiso ciidda agagaarka sapling, oo aad u baahan tahay inaad ku soo lifaaqto. Iyada oo la adeegsanayo canab dhanaan ah waxaa loo diri karaa dhinaca ugu badan ee la aqbali karo.
- Ka dib markii laga beerto canabku waa mid aad u muhiim ah in biyaha lagu daro si aad u badan. Thanks to this, sapling bilaabi doonaa si ay u koraan badan oo si fiican u koraan si dhakhso ah. Haddii canabku la beeray xilliga dayrta, markaas suurtagalnimada barafoobida baadiyaha ayaa hoos loo dhigaa ciidda qoyan.
- Marka beerto dayrta, waa mid aad u muhiim ah in ay ku dhacaan seedling ah, haddii kale waxay xakameyn doonaa. Si aad tan u sameyso, waxaad ku dhejin kartaa tuubo dusheeda hoosteeda oo gebi ahaanba ka buuxsanto ciid.
Geedka canjiga ah by gooynta guntooda
Haddii aad dooratay inaad ku beerto habka loo yaqaan "grafting method for planting", waa in la raaco tilmaamaha soo socda:
- Jidhka waa in la diyaariyaa horay. Waa in la duubo (qaybta kore) oo geli biyaha.
- Qaybta hoose ee jarista ayaa lagu jajabiyaa habab u eg qaabab iyo in lagu daro xal gaar ah ee daroogada "Humate" (10 dhibcood halkii litir oo biyo ah), taas oo kicinaysa qaabka aasaasiga ah.
- Miisaanka geedaha canabka ah wuxuu sidoo kale u baahan yahay in la diyaariyo si taxadar leh oo loo daaweeyo gooyo si loo helo dusha sifiican oo laga saaro qashinka oo dhan qashin qoyan.
- Shtambka xiga waa in si taxadar leh loo kala qaybiyaa qalab yar yar iyo rook.
- Naqshadda waxaa lagu dhejiyay qaybta qaybta la jaray. Waxaa muhiim ah in dhinacyada dhimista u muuqdaan inay jirayaan. Dheeraad ah, qaabdhismeedka oo dhan waa mid si adag u xiran yahay dhar jilicsan oo lagu daboolay dhoobo.
- Xilliga jiilaalka, niyad-qaadashada noocan oo kale ah waa in sidoo kale la nuugo si la mid ah sida seedling
Noocyada daryeelka ee noocyo canab ah "Kodryanka"
Daryeelka saxda ah ee canab waa saldhigga beergooyska. Sidaa daraadeed, beeritaankaaga ku yaala shabakada internetka ee ku yaala iskoolka ha iloobin sifooyinka soo socda ee daryeelka.
Tilmaamidda canab siinta canabka.
Canab koritaanka wanaagsan wuxuu u baahan yahay qoyaan badan. Ka dib oo dhan, baadiyaha canabka ah ee kala duwan ee Kodryanka awood u leh sii kordhaya si ballaaran iyo soo saaro wax soo saarka weyn, taas oo ay u baahan tahay khayraad badan. Sidaa darteed, waraabinta canab ah waa in si joogto ah loo fuliyaa, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada. Burburkii yaraa waa inuu lahaadaa ugu yaraan 3 baaldiyo oo biyo ah, waa weyn iyo qof qaangaar ah waa inuu haystaa ugu yaraan 6.
Mulching habboon ee ciidda agagaarka geedka canabka ah.
Si aad biyaha u ilaaliso dhulka muddo dheer iyo runtii ka faa'iideystaan ​​xayawaanka, ciidda ku wareegsan waa inay ahaataa mulched. Tani, humus ama peat waxaa inta badan la isticmaalaa. Laakiin si mulch ciidda waa kaliya ee guga hore iyo dayrta, sababta oo ah mulching xagaaga laga yaabaa in ay keento xididdada canab si ay u turunturoodaan iyo bilaabaan kallana. Kala saarida walaxda mulching waa in ay ka weyn tahay dhexroor ku wareegsan canab ah.
Miyaan u baahanahay inaan daboolo canab dhan jiilaalka?
Inkasta oo noocyo kala duwan ay u adkaystaan ​​dhaxan, sannadaha ugu horreeya ka dib markii laga beerto waa in ay si joogto ah u noqdaan oo ay ku xanaaneeyaan, haddii kale waxaad si buuxda u lumin kartaa baadiyaha sabiib ah. Intaa waxaa dheer in hilling ciidda, waxaad dabooli kartaa canab iyada oo caws ama caws engegan, isagoo wax culus saaraya sare si ay hay ah aan la qaado by dabaysha.
Canab dhoobo - yoolalka iyo xeerarka.
Iska yaree canab in sanadaha hore ma u qalantaa. Kaliya wuxuu awoodi doonaa inuu horumariyo oo midho u dhasho isagoo aan la gelin. Laakiin horeba leh bilawga ah ee fruiting ee dayrta, waxaa weli lagu talinayaa in ay ku lafaguraan caleemaha yar yar, maadaama ay weli ma awoodi doonaan in ay ka badbaadaan jiilaalka. Marka da'da weyn ee baadiyaha ee manjooyin gogolka ah ee gooyn qalajiyey iyo kuwa aan fruiting waa la fuliyaa. Geedo badan ayaa si toos ah ugu toosi kara koritaanka baadiyaha.
Sida loo bacrimiyo canab "Coderyanka"?
Bacriminta, kala duwanaanta canabka this waa mid aan loo baahnayn. Inta badan, waxay ku filnaan doontaa walxahaas kuwaas oo u gudbin doona xididada laga soo bilaabo mulching. Sanadkiiba hal mar, ka dib Qodashada guga ee ciidda, wax soo saarka beeraha iyo Bacriminta macdanta ayaa la isticmaali karaa, iyadoo si siman u faafaya hareeraha dhammaan grapevine.
Ilaalinta canabkiisa cayayaanka iyo cudurrada.
Kala duwanaanshaha "Codreanca" waa mid aad u adkaysata dhaawaca cuduro kala duwan, sidaas darteed diyaar garowga caadiga ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu buufiyo. Si loo xakameeyo cayayaanka iyo jiirka jiilaalka, geedaha shtambka waxaa lagu xiri karaa dhoobo iyo si fiican u foorarsiga.
Karinta kareemka cream jilicsan ee jilicsan leh kareem, curry iyo maraq raaxo leh
Nooca ugu caansan ee baabuurta caan ah ee loo yaqaan 'Ukrainian agrarians'
Sida loo badbaadiyo hadhuudhkii xilliga qaboobaha: barafka
Fiisooyinka Fikradaha ayaa si fiican u ogyihiin in miraha waa in la shaqeeyo ka hor intaan la beeri si loo helo dalagyo hodan ah oo caafimaad qaba. Mid ka mid ah noocyada daaweynta noocan oo kale ah ayaa barbar socda abuurka. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa faahfaahinta nidaamkan. Maqaalka waxaad ka ogaan kartaa in ay lagama maarmaan tahay in la rusheeyo geedo yaanyo ka hor intaan beeran iyo sababta ay muhiimka u tahay, iyo sida loo sameeyo si sax ah iyo xalka ay ka fiican tahay iyo muddada ay ka baxayaan qalabka beerto. Read More
Daryeelka haboon ee kor u kaca